नयाँ मिस नेपाल कस्ती हुनुपर्छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः जेष्ठ १९, २०७४ - साप्ताहिक
नयाँ मिस नेपाल कस्ती हुनुपर्छ ?
कमन सेन्स भएकी, एटिच्युट नभएकी, संस्कृति बुझेकी, सबैको कला र संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने, आफ्नो प्रतिष्ठामा बस्न सक्ने र मिस वल्र्ड जित्न सक्ने ।
सागरराज, म्युजिक भिडियो निर्देशक
म जस्ती ।
गुड लुकिङ, स्मार्ट, अग्ली, इन्टेलिजेन्ट, लभ्ली र देश प्रति उत्तरदायी ।
यसपालिकी मिस नेपाल मिस वल्र्डमा विजयी हुने क्षमता भएकी हुनुपर्छ ।
यसपालि मात्र होइन, मिस नेपाल सधैं ब्युटी विद ब्रेन हुनुपर्छ ।
मिस नेपाल राम्री भएर मात्र पुग्दैन । संसारको एरिनामा हाम्रो सुन्दर देशको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो बुद्धिमताले भ्याएसम्म सारा संसारलाई नेपाल चिनाउन सक्नुपर्छ र देशको सुन्दर पक्षलाई सुन्दर ढंगबाट प्रस्तुत गर्ने क्षमता भएकी हुनुपर्छ ।
रेनुकासिंह ठकुरी, मोडल
म जस्ती क्युट, हल्का ब्ल्याक ब्युटी, घटीमा साढे पाँच फिट अग्ली, सबै कुराको ज्ञान भएकी, नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता भएकी त हुनैपर्छ । नाम र चर्चामा रहेकी भन्दा योग्य र प्रतिभावानलाई म यसपटककी मिस नेपालका रूपमा हेर्न चाहन्छु ।
आरोही शर्मा, अभिनेत्री
यस्तै भन्ने त छैन, तर देशको प्रतिनिधित्व गरेर मिस वल्र्डमा देशको नाम राख्न सक्ने हुनुपर्छ । उत्तर कण्ठस्थ गरेर होइन, अध्ययन गरेर मन भित्रैबाट देश, राजनीति, कला, साहित्य, खेलकुद आदि सिंगो समाजका विभिन्न विषयमा ज्ञान भएकी हुनुपर्छ । मिजासिली त झन हुनैपर्छ ।
नेपाल चिनेको र चिनाउन सक्ने क्षमता भएकी हुनुपर्छ ।
कवीन्द्रमान शाक्य, फोटोग्राफर
शैक्षिक र बौद्धिक योग्यताका साथै सौन्दर्यले भरिपूर्ण हुनुपर्छ ।
नीलडेविड कटवाल, हेयर डिजाइनर
एकजना प्रतिस्पर्धी राम्री लागेकी छिन्, हेरौं उनले मुकुट लगाउन पाउँछिन कि पाउँदिनन् ।
सौरभ ढकाल, मोडल
एउटा युट्युब भिडियोमा क, ख, गदेखि क्ष, त्र, ज्ञसम्म भन्न पनि नजान्ने प्रतिस्पर्धी पनि देखिए । कमसेकम क देखि ज्ञ सम्म जान्नेले जित्नुपर्छ ।
शारीरिक र मानसिक रूपमै सुन्दरी हुनुपर्छ ।
डिजराज पौडेल, गायक
बौद्धिक र सौन्दर्यसहित देश र समाजलाई नजिकबाट नियालेकी हुनुपर्छ ।
अनुप सक्सेना, कोरियोग्राफर
प्रतिभाशाली सुन्दरी ।
जीवन आचार्य, अभिनेता
मैले सोचे जस्ती ।
राम्री र बाठी ।
सुशील, अनुशासित र राम्री हुनैपर्छ । देशका बारेमा जानकार पनि हुनुपर्छ ।
मिस नेपाल साँच्चैकी मिस नेपाल जस्ती हुनुपर्छ । सुन्दरता र बुद्धिमताको संगम ।
संजोग कोइराला, अभिनेता
नयाँ अवतारमा नम्रता